अनु पार्टानेन/ट्रेभर कोर्सन
हामीहरु दुई वर्षअघि ब्रुकलिनको एउटा रमणीय ठाउँमा बस्ने गर्थ्यौं । अनुभवी पेशाकर्मी भएकाले पनि एउटा विशेषाधिकारयुक्त जीवनयापन गरेका थियौं । पहिलो सन्तान छोरी होस् भन्ने हामी दुबैको ठूलो चाहना थियो। ब्रुकलिनमा नै छोरी जन्माउँदा दुबै जना निकै खुसी भयौं । किनकी हामी संयुक्त राज्य अमेरिकाका नागरिक थियौं । त्यसैले हाम्रो भविष्य उज्वल छ भन्ने धेरैलाई लाग्थ्यो । तर हामीहरु भित्रभित्रै अति असुरक्षित र चिन्तित बनेका थियौं ।
हामीले यस्ता कुरा सोचिरहेका बेला अनुलाई उनको गृह नगर हेलसिन्की (फिनल्याण्डको राजधानी) मा एउटा काम मिल्यो ।
‘अदिगो र दमनकारी नर्डिक मुलुकमा फिनल्याण्ड पनि पर्छ,’ भनेर राष्ट्रपति ट्रम्पसहित केही अमेरिकीले भनेको सुनेका थियौं । उनीहरुको नजरमा फिनल्याण्डजस्ता नर्डिक मुलुकहरु ‘सुसारे समाजवादी राज्य’ थिए र उनीहरुले पटक-पटक यही भनेको सुनेका थियौं । हामीले फिनल्याण्डमा बसाइँसराइँ गर्ने भनेर सोचिरहँदा आर्लिङटनमा हुर्किएका ट्रेभरको परिवार र अन्य अमेरिकी साथीसँग यसबारे सहयोग र सल्लाह लिएका थियौं । उनीहरु कसैले पनि हामीहरु सोभियतकालीन तानाशाही शासन रहेको मुलुकमा जाँदैछौं भनेर सोचे जस्तो लागेन । वास्तवमा उनीहरु सबैले हामीलाई फिनल्याण्ड जान भने । सिलिकन भ्यालीमा ३ जना सन्तानसहित बस्ने एकजना लगानीकर्ताले समेत ‘पाए त म पनि फिनल्याण्ड गइहाल्थेँ नि’ भने ।
त्यसैले सबैको कुरा सुनेपछि हामी फिनल्याण्डतिर लाग्यौं ।
तर फिनल्याण्डमा करदाताले तिरेको कोषबाट सञ्चालित सर्वव्यापी स्वास्थ्य सेवा (युनिभर्सल हेल्थ केयर) अमेरिकाको स्वास्थ्य सेवा जत्तिकै स्तरीय छ । यसका लागि ठूलो रकम वा कागजातको थुप्रो जम्मा गर्नुपर्दैन । यसमा हामी स्वतः समावेश भएका छौं । हामीले हाम्री छोरीलाई अति सुन्दर, स्तरीय र जातीय रुपमा विविधतायुक्त सरकारी बाल स्याहार केन्द्र (पब्लिक डे केयर सेन्टर) मा भर्ना गरेका छौं । बालविकासका लागि केन्द्रमा सञ्चालन हुने गुणस्तरीय/व्यावसायिक क्रियाकलापबाट हामी निकै चकित भएका छौं । अनि शुल्क महिनाको ३ सय डलर मात्रै ! उक्त शुल्क पब्लिक डे केयरका लागि तिर्नुपर्ने अधिकतम शुल्क हो किनभने यहाँको सरकारले डे केयरका लागि सबै परिवारलाई अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।
र, हामी यही बस्यौं भने हाम्री छोरीले सामान्य खर्चमा नै किन्डरगार्टेनदेखि कक्षा १२ सम्म विश्वकै उत्कृष्ट शिक्षा पाउने छिन् । फिनल्याण्डको जुन ठाउँमा बसे पनि उनले यस्तो शिक्षा पाउन सक्छिन् । कलेजमा समेत कुनै शैक्षिक शुल्क तिर्नुपर्दैन । यदि हामीले अर्को सन्तान जन्मायौं भने स्वतः सन्तान स्याहार विदा (प्यारेन्टल लिभ) पाउँछौं । १ वर्षसम्म पाइने यो विदा बाबुआमाले पालैपालो लिन सक्छन् र करबाट नै विदाबापतको तलब भुक्तान गरिन्छ । त्यस्तै यहाँ वर्षमा ४ देखि ६ हप्तासम्म तलबी विदा पाइन्छ ।
केही समयअघि जेपि मोर्गन एसेट म्यानेजमेन्टको बजार तथा लगानी हेर्ने अध्यक्षले तयार गरेको एक प्रतिवेदनमा सबैलाई चकित पार्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । उक्त प्रतिवेदनमा ‘नर्डिक क्षेत्र अमेरिका जस्तै व्यवसायी मैत्री मात्रै छैन’, ‘स्वतन्त्र बजारसम्बन्धी महत्वपूर्ण सूचक समेत अमेरिकामा भन्दा राम्रो भएको’ उल्लेख छ । साथै निजी सम्पत्तिको राम्रो सुरक्षा, सरकारी नियन्त्रणका कारण प्रतिस्पर्धामा कम प्रभाव र पूँजी प्रवाह तथा व्यापारमा थप खुलापन रहेको उल्लेख छ । त्यस्तै विश्व बैंकले ‘डेनमार्क र नर्वेमा व्यापार/व्यवसाय गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकामा भन्दा सजिलो रहेको’ बताएको छ ।
त्यसपछि फिनल्याण्डमा समाजवादका लागि के गरियो/फिनल्याण्डमा समाजवादमाथि के भयो ? फिनल्याण्डका चर्चित राजनीतिक इतिहासकार तथा हेल्सिन्की विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पाउली केटुनेनले गृहयुद्धपछि फिनल्याण्डका रोजगारदाताले ‘किसानलाई लालपूर्जा दिएर स्वतन्त्र रुपमा कृषि कर्म दिनुपर्ने’ अवधारणा लागू गरेको बताउँछन् । वीरतापूर्ण व्यक्तिवादको यो अवधारणाबाट उनीहरुले मजदूर युनियनलाई कमजोर बनाउन खोजेको केटुनेनले बताए । बिसौं शताब्दीको पूर्वार्द्धमा समाजवादीहरुले फिनल्याण्डको राजनीतिमा भूमिकासहित फर्किएका थिए । तर फिनल्याण्डमा पनि समाजवादी धारको क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा उदाउन सकेन, अमेरिकामा झैं यो धारलाई क्रान्तिकारी शक्तिको रुपमा उदाउनबाट रोकियो ।
फेरि फिनल्याण्ड अर्को रक्तपातपूर्ण युद्धमा फस्यो । दोस्रो विश्वयुद्धमा नाकैमा रहेको साम्यवादी रुससँग ठूलो मूल्य चुकाएर लड्यो । युद्धपछि फिनल्याण्डमा औद्योगिक युगले थप गति लियो, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्जमा देखिन थाल्यो । मजदूर युनियनको शक्ति बढ्यो, समाजवादप्रति पुनः समर्थन/सहानुभूति देखियो । यही क्षणमा नै फिनल्याण्डको इतिहासले अभूतपूर्व दिशा लिएको थियो ।
फिनल्याण्डका पूँजीपति/रोजगारदाताहरु पूँजीवादमाथि समाजवादले उत्पन्न गर्न सक्ने खतराबारे निकै सचेत र गम्भीर थिए । उनीहरुले मजदूरका आवश्यकताबारे बोल्ने राजनीतिज्ञहरुको निरन्तर दबाबमा पर्न थालेको महसुस गरे । फिनल्याण्डका पूँजीपतिले देशमा हुन सक्ने सम्भावित समाजवाद रोक्न, आफ्नो निजी सम्पत्ति र उद्योगको सुरक्षा गर्न आफ्नो कार्यनीति फेरे । दोस्रो विश्वयुद्धपछि उनीहरुले शोषण गरेर मजदूरको अवस्था थप दयनीय गर्नुको साटो सरकारसँग सहकार्य गर्न थाले । उनीहरुले दीर्घकालीन रणनीति तर्जुमा गर्ने र यस्तो रणनीतिमा मजदूर युनियनमार्फत् मजदूरलाई सहभागी गराउने भन्दै सरकारसँग सहकार्य गरेका थिए ।
तर, सन् २००६ मा फिनिश अनुसन्धानकर्ता मार्कस एन्टी, युहो सारी र युहाना भार्टिआनेनले गरेको एक अध्ययनले यसको ठीकविपरीत निष्कर्ष निकालेको थियो । उक्त प्रतिवेदनको पहिलो निष्कर्ष छ- बिसौं शताब्दीभर र अहिले पनि फिनल्याण्ड र यहाँको अर्थतन्त्र खुला बजार, निजी व्यवसाय र पूँजीवादप्रति प्रतिबद्ध रहेको छ ।
अन्य नर्डिक मुलुकले पूँजीवादको यो स्वरुप फिनल्याण्डमा भन्दा पहिला नै लागू गरिरहेका छन् । ती मुलुकमा यो प्रणाली थप सफल भएको पाइन्छ । पाउली केटुनेनका अनुसार सन् १९३० को दशकमा नै नर्डिक क्षेत्रका रोजगारदाताले महामन्दीसँगै प्रकट भइरहेको संकट देखेका थिए । उनीहरुमध्ये अधिकांशले सिकेको एउटा महत्वपूर्ण पाठ थियो- सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको पूँजीवादको नर्डिक विधिप्रति सहमति जनाउनुपर्छ र यसलाई अनुशरण गर्नुपर्छ ।
प्रत्येक नर्डिक मुलुकका आ-आफ्नै विशिष्टता/भिन्नता छन् । सबै मुलुकभित्र आ-आफ्नै त्रुटि र कमजोरी छन्, विशिष्ट खालको इतिहास र नागरिक असहमति कायम छ । सशक्त युनियन र रोजगारदाताबीच देखिने निरन्तर विवाद/द्वन्द्वले यहाँको प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न सहयोग गरेको छ । कहिलेकाहीं यस्तो विवाद निकै भद्रगोल समेत हुने गर्छ । यही हप्ता नै मजदूर विवादका कारण फिनल्याण्डका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपरेको छ ।
तर समग्रमा हेर्दा सबै नर्डिक मुलुकहरु र यहाँका व्यवसायिक घरानाहरु एउटा सामान्य सुत्रप्रति सहमत देखिन्छन् । अर्थात् यदि कामदारलाई राम्रो पारिश्रमिक दिने हो र उनीहरुको जीवन गुणस्तरीय बनाउने, सबै नागरिक र उनीहरुका सन्ततिले स्वस्थ जीवनयापन गर्ने खालको र सबैले मर्यादित जीवनयापन बिताउन सक्ने, सबैले समान अवसर उपयोग गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक र जवाफदेही सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुने हो भने पूँजीवादले राम्रोसँग काम गर्न सक्छ भन्नेमा आम सहमति देखिन्छ । हाम्रा लागि यसले एउटै अर्थ राख्छ- योसँगै हाम्रा लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र राजनीतिक अधिकार वृद्धि भएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाका कम्पनीले स्वास्थ्य योजना कार्यान्वयन गर्न र कम्पनीका लागि योग्य र शिक्षित कामदार खोज्नका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् भने नर्डिक मुलुकमा भने सबै नागरिकलाई सरकारले नै गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग उठिरहेको छ । यसले गर्दा व्यवसायीहरुलाई सर्वोत्कृष्ट व्यवसायिक प्रतिफल निकाल्नेप्रति केन्द्रित हुन सहज भएको छ । यसले सबैलाई सहज बनाइदिएको छ । फिनल्याण्डका विद्यार्थी, श्रमिक/मजदूर, वैध आप्रवासी, उच्च पारिश्रमिक पाउने व्यवस्थापक, सम्पन्न परिवार सबैले यहाँको करमा आधारित स्वास्थ्य सेवा र विश्वकै उत्कृष्ट सरकारी विद्यालयबाट लाभान्वित भएका छन् ।
यसबाट एउटा महत्वपूर्ण पाठ सिक्न सकिन्छ- जब पूँजीपतिले सरकारलाई वैचारिक शत्रुको साटो व्यवस्थापकीय सहयोगीको रुपमा लिन्छन्, जब सबै नागरिकले उच्च गुणस्तरका सार्वजनिक संस्थाहरुमा आफ्नो पनि हिस्सा भएको महसुस गर्छन् तब सरकारले आश्चर्यजनक र प्रभावकारी रुपमा काम गर्न सक्छ ।
पूँजीपतिका लागि अमेरिकामा व्यवसाय गरी सबैभन्दा प्रभावकारी बन्ने वा नाफा कमाउने सबैभन्दा उत्तम विधि यही नै हो त ? हाल अमेरिकामा आक्रोश र डर व्याप्त हुँदै गइरहेको छ । विश्वव्यापीकरणलाई पछाडि धकेल्ने भनेर नै ट्रम्प राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन् । यो कुनै नौलो कुरा होइन् । त्यस्तै अमेरिकी मजदूरले प्रतिरोध गरिरहेका छन् । गत वर्ष अमेरिकामा सन् १९८० को दशकपछि कै ठूलो संख्यामा मजदूरहरु बन्द/हड्तालमा सहभागी भएका थिए । यसै वर्ष जनरल मोटर्सका मजदूरले गरेको हड्ताल ५० वर्षमै सबैभन्दा ठूलो थियो । यो कुनै आश्चर्यको कुरा होइन । त्यस्तै गलअपले गरेको एक सर्वेक्षण अनुसार १८ देखि २९ वर्ष उमेर समूहका अमेरिकीमध्ये ५० प्रतिशत अमेरिकीले समाजवादप्रति सकरात्मक सोंच राख्छन् । यो पनि कुनै अचम्मको विषय होइन ।
भविष्यमा समाजवादीको वर्चश्व हुन सक्नेप्रति अमेरिकी पूँजीपति र व्यवसायीको ध्यान जान थालेको छ । केही वर्षदेखि अमेरिकी पूँजीपति निक हानाउरले आफ्ना अति धनाढ्य साथीहरुलाई ‘हामीलाई घोच्न पिचफोर्क (एकखालको चुच्चो औजार) तयारी अवस्थामा राखिएको छ’ भनेर चेतावनी दिँदै आएका छन् । वारेन बफेटले धनीका लागि कर बढाउनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । यसै वर्ष अर्बपति लगानीकर्ता रे डालियोले ‘आधारभूत रुपमा नै पूँजीवादले अधिकांश मानिसको पक्षमा काम नगरेको’ स्विकारेका छन् । योङ एण्ड रुबिक्यामका मानार्थ अध्यक्ष (चेयरमेन एमेरिटस) पिटर जर्जेस्कुले अझ प्रस्ट रुपमा पूँजीवादबारे टिप्पणी गरेका छन् । जर्जेस्कुले ‘पूँजीवादले विस्तारै आत्महत्या गर्दैछ’ भन्ने ठान्छन् । पछिल्लो समय पूँजीवादी वृत्तमा यस खाले चिन्ता व्यापक रुपमा फैलिएको पाइन्छ । द फाइनान्सिअल टाइम्सले आफ्ना व्यवसाय मैत्री पाठकसामु ‘पूँजीवाद संकटमा परेको’ र वास्तविक स्वतन्त्र बजार र अवसरलाई पुनर्स्थापना गर्न ‘पूँजीवादको पुनर्संरचा गर्नुपर्ने’ भनेर एउटा उच्च स्तरीय संस्करण/श्रृङ्खला नै सुरु गरेको थियो । अमेरिकाका मुख्य वित्तीय तथा औद्योगिक अगुवाहरुले एउटा आर्थिक गोलमेच सम्मेलन गरी ‘अबदेखि आफूहरुले नाफालाई मात्रै होइन, कर्मचारी/मजदूर, ग्राहक, शेयरधनी र समुदायलाई पनि प्राथमिकतामा राख्ने’ घोषणा गरेर आर्थिक वृत्तमा सनसनी नै फैलाएका थिए । उनीहरुले यो नयाँ अवधारणालाई ‘सरोकारवाला पूँजीवाद’ भनेर नामाकरण गरेका छन् ।
तर सर्वेक्षणले मुलुकको भविष्यबारे अमेरिकीहरु त्यति उत्साहित देखिँदैनन् र शीघ्र नै अमेरिकामा अस्वस्थ/खराब राजनीतिक द्वन्द्व सुरु हुन लागेको देखाउँछ । केही सैन्य विज्ञ र इतिहासकारहरु यसमा सहमत देखिन्छन् । अमेरिकामा गृहयुद्ध भड्किन सक्ने सम्भावना निकै रहेको उनीहरुको विश्लेषण छ ।
अमेरिकी पूँजीपतिले ‘लागत-लाभको कुन प्रणाली/नीति अपनाउँदा सबैभन्दा विवेकपूर्ण हुन्छ ?’ भनेर गम्भीर भएर आफैलाईं सोध्नुपर्ने बेला आएको छ । फिनल्याण्डमा गएर नबुझ्ने तर कसरी मुनाफा कमाउन सकिन्छ भनेर मात्रै सोचे भने यो झन घातक हुन सक्छ ।
यतिबेला हामीले हेल्सिन्कीमा दोस्रो पटक हिउँद र हिउँदसँगै आउने निरसता सामना गरिरहेका छौं । हामीलाई हाम्रा फिनिश साथीहरुले ‘पहिलो हिउँदलाई कसरी सामना गर्नुभयो र यो हिउँदमा पनि यही बस्न सक्नुहुन्छ त ?’ भनेर सोधिरहनु हुन्छ । र हामीले सधैँ एउटै जवाफ दिने गर्छौं- ‘हिउँदल आउँदैमा हामीहरु डराउनु पर्दैन, वास्तवमा यसले तपाईंलाई खुसी बनाउँछ ।’ अधिकांश मानिसले गुणस्तरीय जीवनयापन गरिरहेको फिनल्याण्डको कार्यक्षेत्रमा जानुपूर्व खिन्न पार्ने र हिउँले भरिएको सडक हुँदै दुई वर्षीया छोरीलाई स्ट्रोलरमा राखेर रमाइलो डे केयर सेन्टरमा लैजाँदा होस् वा उनलाई मैत्रीपूर्ण, गुणस्तरीय र पूर्ण निशुल्क बाल स्वास्थ्य केन्द्रमा लैजाँदा होस्, हिउँदसँग हामी डराएका छैनौं । हिउँद आएपछि हामीहरु झन खुसी भएका छौं ।
*न्यूयोर्क टाइम्समा प्रकाशित आलेख साझापोस्टका लागि सुनिल बरालद्वारा अनुदित